C/raxmaan C/Shakuur oo farriin xasaasi ah u diray Madaxweyne Farmaajo – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Ciidamo ka tirsan kuwa Xoogga dalka ayaa Maanta xirtay waddo ku dhow Xarunta Madaxtooyadda Soomaaliya gaar ahaan wadada ka timaada dhinaca Taalada Daljirka Daahsoon, iyagoona ka cabanayay Mushaar la’aan heysatay muddo sanad iyo 9 bilood ah.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa ka hadlay Cabashada Mushaar la’aanta ah ee kasoo yeertay Ciidamada, kuwaasi oo kasoo baxay fariisimihii ay ku lahaayeen Gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Waxaa uu sheegay C/raxmaan C/Shakuur oo qoraal soo saaray in aysan suura-gal aheyn in Ciidanka Xoogga ee ku sugan furimaha dagaalka ay halkaas uga baxaan Mushaar la’aan soo wajahday.
Madaxda Dowladda Federaalka gaar ahaan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu C/raxmaan C/Shakuur ugu baaqay in Ciidanka gadoodsan ee cabashada muujiyay siiyaan xuquuqdooda ay baahan yihiin.
“Madaxda dowladda Federaalka ah, gaar ahaan Madaxweynaha oo ah Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ugu baaqayaa in ciidankan gadoodsan xuquuqdooda la siiyo. Suuragal maaha in ciidankeennu furamaha dagaalka cadawga kaga difaacaan, xaqoodiina waayaan. Waxa keli ah ee madaxda N&N sheegan jireen waa bixinta mushaarka ciidanka, tiina maanta ayey beenowday, mar haddii qaar ciidanka ka mid ah uu 18-bilood mushaar ka maqan yihiin” ayuu yiri Siyaasiga C C Shakuur.
Madaxda Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa marar badan sheegay in ciidamada diiwaangashan ee dowladda si joogta ah u qaataan mushaarkooda, hayeeshee Cabashadan kasoo yeertay Ciidanka Xoogga ayaa Maanta aad loo hadal-hayaa.
Meydka Muwaadin Soomaali ah oo laga helay Xarun ku taalla K/Afrika